အိတ်ဇောပိုက်က ကျောက်ဇကာရဲ့ တန်ဖိုး
အိတ်ဇောပိုက်က ကျောက်ဇကာဆိုတာဘာလဲ? ဘာကြောင့်တန်ဖိုးရှိတာလဲ? ကျောက်ဇကာခွဲထုတ်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်တတ်သလဲ?
ကားလောက အခေါ်အဝေါ်အတိုင်း ကျောက်ဇကာလို့ခေါ်လိုက်တာပါ။ နာမည်အရင်းက catalytic converter ပါ ။ Catalytic converter ဆိုတာက catalyst ဆိုတဲ့ ကိုယ်တိုင်မပြောင်းလဲသော်လည်း ဓာတ်ပြုမှုကို လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲစေသော ဓာတ်ကူပစ္စည်း ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေလာတာပါ။ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်က အိတ်ဇောမန်နီဖိုး (exhaust manifold) ကနေထွက်လာတဲ့ အဆိပ်ရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို အန္တရာယ်ပြုမယ့်
ဓာတ်ငွေ့တွေရဲ့ အန္တရာယ်အဆင့်နိမ့်ကျသွားအောင် ဓာတ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက် ဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတာပါ။
သူကဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ပေးသလဲဆိုရင် ကျနော်တို့ ၉ တန်း၊ ၁ဝ တန်း ဓာတုဗေဒ (chemistry) ဘာသာရပ်မှာသင်ရတဲ့ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ ပေါင်းပြီးဓာတ်တိုးသည့်ဖြစ်စဉ်နှင့် ဓာတ်လျော့သည့်ဖြစ်စဉ် (oxidation and reduction reaction) အခြေခံသဘောတရားကိုသုံးပြီး အဆိပ်ငွေ့တွေကို လျော့ကျအောင်လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
ကားရဲ့ ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်နဲ့ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကနေထွက်လာတဲ့ အငွေ့တွေမှာ အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေပါပါတယ်။
အဲ့ဒါတွေက CO (carbon monoxide)၊
HC (unburned hydrocarbons) စွမ်းအင်အဖြစ်အကုန်မလောင်ကျွမ်းဘဲ ကျန်နေတဲ့ လောင်စာဆီတွေ
၊ NoX (oxides of nitrogen) အစရှိတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေပါ။
အဲဒီဓာတ်ငွေ့တွေကို အောက်ပါ ဓာတုဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်း ညီမျှခြင်းတွေသုံးပြီး ပြောင်းလဲပါတယ်။
ဓာတ်လျှော့ညီမျှခြင်း (reduction reaction) ကိုသုံးပြီး အဆိပ်ရှိတဲ့ နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုက်ကို အဆိပ်မရှိတဲ့ အောက်ဆီဂျင်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။
NoX (oxides of nitrogen ) = N2 (nitrogen) + O2 (oxygen)
ဓာတ်တိုးညီမျှခြင်း (oxidation reaction) ကိုသုံးပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေကို အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပေါင်းပြီး အန္တရာယ်လျော့ပါးအောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
CO (carbon monoxide ) + O2 (oxygen) = CO2 (carbon dioxide)
HC (hydrocarbons) + O2 (oxygen) = H2O (Water) + CO2 (carbon dioxide)
Catalytic converter က ကိုယ်တိုင်ဓာတ်ပြောင်းလဲမှု မရှိပေမယ့် အဲဒီအထက်က ဓါတုပုံသေနည်းတွေ အတိုင်း ဓာတ်ငွေ့တွေတစ်ခုခုနဲ့ တစ်ခုခု ပေါင်းစီးဖို့၊ ခွဲထွက်ဖို့ကို လျင်လျင်မြန်မြန်ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ကားအင်ဂျင်ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ လူကိုဒုက္ခပေးမယ့် အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့တွနဲ့၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းစေမယ့် ဓာတ်ငွေ့တွေကို အန္တရာယ်မဖြစ်စေမယ့် ဓာတုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
ဒါက catalytic converter ခေါ် ကျောက်ဇကာရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံတွေပါ။
(Catalytic converter) ကျောက်ဇကာက ဘာလို့ရောင်းစားလို့ရတာလဲ?
အခုကားတော်တော်များများမှာ ကျောက်ဇကာ ခွဲရောင်းရင် ၂ သောင်းခွဲ ၃ သောင်းကနေ သိန်းဂဏန်းနားအထိ ရနိုင်တယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ ကျောက်ဇကာအလကားခွဲပေးတယ်ဆိုတဲ့ ဆိုင်တွေလည်း နေရာတော်တော်များများမှာ တွေ့လာရပါတယ်။ ကျောက်ဇကာကို ဘာကြောင့်ဝယ်တာလဲဆိုရင် ကျောက်ဇကာထဲမှာပါတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကြောင့်ပါ။ ကျောက်ဇကာထဲမှာ ဘာတွေပါလဲပြောပြပါမယ်။
ကျောက်ဇကာ (catalytic converter) ရဲ့ပုံစံက ပျားအုံ၊ ပတူအုံတို့လိုပုံစံမျိုးတွေပါ။ ကျောက်ဇကာထဲမှာ အဓိက အလုပ်လုပ်တဲ့ (oxidation and reduction reaction) နေရာနှစ်ခုရှိပြီး တန်ဖိုးကြီးကျောက်သုံးမျိုးပါဝင်ပါတယ်။
၁။ Platinum (ဓာတ်တိုးခြင်း၊ ဓာတ်လျော့ခြင်းနှစ်မျိုးစလုံးကိုဖြစ်စေတဲ့ ရွှေဖြူ လို့ခေါ်တဲ့ ပလက်တီနမ်)
၂။ Rhodium (ဓာတ်လျော့ခြင်းဖြစ်စဉ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အဖြူရောင် သတ္တုဒြပ်စင်)
၃။ Palladium (အောက်ဆီဂျင်နှင့်ပေါင်းပြီး ဓာတ်တိုးဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ပလက်တီနမ်နွယ်ဝင် သတ္တုဒြပ်စင်)
ဆိုတဲ့ တန်ဖိုးရှိ သတ္တုဒြပ်စင်သုံးမျိုးက ထုတ်လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာအပေါ်မူတည်ပြီး ၃ ဂရမ်ကနေ ၇ ဂရမ်အထိ အဓိက ပါဝင်တာပါ။ ဒါ့အပြင် Copper ၊ Nickel ၊ Cerium ၊ Iron နှင့် Manganese ဆိုတဲ့ အခြားသတ္တုတွေလည်းပါဝင်ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီသတ္တုတွေကြောင့် ရောင်းစားလို့ရတာပါ ။
ဒါကတော့ ကားလောက အခေါ် ကျောက်ဇကာ (catalytic converter) ရဲ့အကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါ။
ကျောက်ဇကာ ခွဲရင်ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ? ကား exhaust system က အောက်ဆီဂျင်ဆန်ဆာ (oxygen sensor) တွေက ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
ကျောက်ဇကာဆိုတဲ့ catalytic converter ကိုခွဲထုတ်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်တတ်သလဲဆိုတာသိဖို့အတွက် ကားအိတ်ဇောစနစ်က ကျောက်ဇကာနဲ့တွဲဖက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ oxygen sensor တွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကို နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။
Oxygen sensor ကို 1976 ခုနှစ် Volvo 240 မှာစတင်တီထွင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ 1980 ပြည့်နှစ်မှာတော့ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်မှာ လေထုညစ်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်ရေး ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုတွေလုပ်လာပြီး
1981 နောက်ပိုင်းကားတိုင်းမှာ oxygen sensor တွေကို ဥပဒေအရ မတပ်မနေ တပ်ဆင်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးပေါ် oxygen sensor တွေကတော့ 1996 ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ OBD2 (On-board diagnostics) နည်းပညာသုံး oxygen sensor တွေပါ။ Oxygen sensor တွေကို ပုံမှန်အားဖြင့် အိတ်ဇောပိုက်မှာတပ်ဆင်ပြီး ကျောက်ဇကာ (catalytic converter) ရဲ့ရှေ့မှာ (upstream/pre-cat sensor) အဖြစ်တစ်လုံး၊ ကျောက်ဇကာ (catalytic converter) ရဲ့နောက်မှာ (downstream/post-cat sensor) အဖြစ်တပ်ဆင်ပြီး အချို့မော်ဒယ်ကားတွေမှာတော့ oxygen sensor အနည်းဆုံး ၁ လုံးကနေ ၃-၄ လုံးအထိတပ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။
Oxygen sensor ရဲ့အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံက zirconium dioxide ဒြပ်စင်ကို oxygen sensor ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာ steel sheel ဆိုတဲ့ ကာဗာနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပြီး အာရုံခံဝတ္တုပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်။အဲဒီ အာရုံခံပစ္စည်းကို platinum electrode ရယ် wire leads line တွေရယ်နဲ့ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ Oxygen sensor ရဲ့အခြေခံအလုပ်လုပ်ပုံက chemical formula ဖြစ်တဲ့ O2 (အောက်ဆီဂျင်အက်တမ်တွေဟာ အမြဲစုံတွဲပဲ ရွေ့လျားပါတယ်) အက်တမ်တွေရွေ့လျားမှုကို အာရုံခံတဲ့နည်းပညာတွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ (Oxygen sensor အတွင်းအလုပ်လုပ်ပုံတွေ ရှုပ်ထွေးတာမလို့ အချိန်ရရင်အသေးစိတ်ရေးသားပါ့မယ်)
Oxygen sensor ရဲ့အထူးပြု လုပ်ဆောင်ချက်တွေက Oxygen sensor ဟာအိတ်ဇောကနေထွက်လာတဲ့ အိတ်ဇောငွေ့တွေထဲကနေ အောက်ဆီဂျင်ကိုအာရုံခံပြီး အိတ်ဇောငွေ့တွေထဲမှာ rich mixture (အောက်ဆီဂျင်နည်းပြီး မီးမလောင်ကျွမ်းနိုင်ဘဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ လောင်စာတွေများနေသလား)၊ lean mixture (လောင်စာတွေလောင်ကျွမ်းဖို့လိုတဲ့ အောက်ဆီဂျင်ထက်ပိုပြီး အောက်ဆီဂျင်တွေများနေသလားဆိုတာကို) ECM (Engine Control Module)၊ ECU (Engine Control Unit) ကိုလှမ်းသတင်းပို့ပေးပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် (upstream/pre-cat sensor) ကအိတ်ဇောငွေ့တွေထဲက အောက်ဆီဂျင်ကို အာရုံခံပြီး (downstream/post-cat sensor) ကတော့ ကျောက်ဇကာ (catalytic converter) ရဲ့
စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ အဲ့ဒီကျောက်ဇကာ (catalytic converter) ကနေထွက်လာတဲ့ အောက်ဆီဂျင်ရဲ့ ပမာဏကို အာရုံခံပြီး သတင်းပို့ပေးပါတယ်။ အဲဒီတော့မှာ ECM (Engine Control Module) က oxygen sensor ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုဖတ်ပြီး အင်ဂျင်ကိုပို့ပေးမယ့် လောင်စာဆီနဲ့ လေအချိုးအစားကို လိုအပ်သလို အချိုးချပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ အဲဒါကို
(feedback control loop) လို့ခေါ်ဆိုပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် အင်ဂျင်ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေတယ်။ မလိုအပ်ဘဲ ဆီပိုစားခြင်းကို လျော့ချပေးတယ်၊ အိတ်ဇောကနေထွက်လာတဲ့ ညစ်ညမ်းစေတဲ့ အိတ်ဇောငွေ့ပမာဏကိုလျော့ကျစေပါတယ် ။
ဒီလောက်ဆိုရင် အိတ်ဇောစနစ် (exhaust system) မှာပါဝင်နေတဲ့ oxygen sensor တွေ catalytic converter တွေဘယ်လိုတွဲဖက်လုပ်ဆောင်နေသလဲဆိုတာကို အခြေခံအားဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလို
အခြေအနေမျိုးမှာ catalytic converter ကျောက်ဇကာကို ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် catalytic converter နဲ့တွဲဖက်ပြီး အတူတကွလုပ်ဆောင်နေတဲ့ oxygen sensor တွေမှာ လုပ်ဆောင်မှုတွေ အာရုံခံမှုတွေချို့ယွင်းပြီး သတင်းပို့တဲ့ အချက်အလက်တွေမှားယွင်းကုန်ပါမယ်။ အဲဒီလို ချို့ယွင်းမှုတွေဖြစ်ကုန်တဲ့အတွက် ECU (Engine Control Unit) ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေလွဲမှားကုန်ပြီး ပုံမှန်လောင်စာဆီနဲ့ လေရောနှောမှုအချိုးအစား (ဥပမာအားဖြင့် ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လေနဲ့ဆီအချိုးအစားဟာ 14.7:1) မှားယွင်းပြီး အင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည်ကျသွားတာတွေ၊ Idle (အင်ဂျင်အနှေးလည်ပတ်မှု) အခြေအနေမှာ အတက်အကျ မငြိမ်တာတွေ၊ လေတံခါး (throttle) မှာမညီညွတ်တဲ့ အဆွဲအရုန်းဖြစ်လာတာတွေ၊ အင်ဂျင် စ နှိုးရခက်လာတာတွေ၊ ကြက်ဥပုတ်နံ့လို အနံ့ဆိုးတွေ အိတ်ဇောကနေထွက်လာတာတွေ၊ engine check မီးလင်းလာတာတွေ၊ အရင်ထက် ဆီပိုစားလာတာတွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ဒါကတော့ ကျောက်ဇကာနဲ့ပတ်သတ်ဆက်နွယ်ပြီး oxygen sensor တွေနဲ့ ကားအင်ဂျင်စနစ်တွေ ဘယ်လိုဆက်စပ်လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတာပါ။
တချို့မော်ဒယ်နိမ့်ကားတွေမှာ ကျောက်ဇကာခွဲထုတ်လိုက်လို့ ဘာပြဿနာမှ ပေါ်မလာပေမယ့် တချို.မော်ဒယ်မြင့်ကားတွေမှာတော့ ကျောက်ဇကာထုတ်ပြီးနောက်ပိုင်း oxygen sensor ချို့ယွင်းမှုတွေကနေတဆင့် self-diagnostics (ရောဂါလက္ခဏာကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင်အမည်သတ်မှတ်ခြင်း)
စနစ် ပြဿနာတွေတသီတတန်းကြီးပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ 1981 ခုနှစ်ကတည်းက catalytic converter ဆိုတဲ့ ကျောက်ဇကာတွေကို ဥပဒေအရ မတပ်မနေရ တပ်ဆင်အသုံးပြုရပြီး၊ catalytic Converter တွေကို ခွဲထုတ်ခြင်းဟာ ပတ်ဝန်းကျင်လေထုကို ပြင်းထန်စွာညစ်ညမ်းစေတာကြောင့် ဥပဒေအရ တရားမဝင်ဘဲ အရေးယူခံရမှာပါ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ ဆီမသန့်ရှင်းမှုကြောင့် ကျောက်ဇကာပိတ်ဆို့မှုပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်ရတာမလို့ ကျောက်ဇကာခွဲထုတ်တဲ့ ကားတွေအများကြီးရှိလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ကျောက်ဇကာခွဲတာကောင်းလား မကောင်းဘူးလားဆိုတာကတော့ ကားလောကအသိုင်းအဝိုင်းမှာ တစ်ယောက်တစ်မျိုးငြင်းခုန်နေကြဆဲပါပဲခင်ဗျာ။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေ ညီကိုမောင်နှမအားလုံး နည်းပညာဗဟုသုတ ကြွယ်ဝကြပါစေ။
Honda Civic အသစ် သုံးသပ်ချက် (International)
အိုဟောင်းစလစ် ရှားပါးလာမှုကြောင့် consignment စနစ်ဖြင့်တင်သွင်းထားသောကားများ စလစ်အစားထိုးခွင့်ပြုပေးရန် လိုအပ်နေ